Consumer Tips - isiZulu
Sebenzisa umgomo "Zikhokhele wena kuqala".
Zikhokhele wena kuqala umgomo wezezimali obandakanya ukonga imali (ukuzikhokhela wena kuqala) ngaphambi kokusebenzisa imali. Kusho ukuthi ufaka kuqala imali esikhwameni sokonga imali noma sokubeka imali uyibekele isikhathi esithile. Isitha sokonga selokhu kwaba ukusebenzisa imali.
Yazi ukuthi imali yakho iya kuphi.
Sebenzisa njalo isabelomali ukubheka ukuthi ngabe uyisebenzisa kanjani imali yakho. Lokhu kunciphisa umkhuba wokusebenzisa kakhulu imali.
Sebenzisa abahlinzeka ngemisebenzi yezezimali ababhalisiwe.
Ungalinge ungene kunoma yiliphi ibhizinisini nezinkampani zomshuwalense noma abeluleki kwezezimali abangabhalisiwe Nesigungu Sezemisebenzi Yezezimali, Financial Services Board
(FSB). Uma ungenaso isiqiniseko shayela inombolo yamahhala yakwa-FSB (0800 202087) ukuqinisekisa ukubhaliswa nokuba nezincwadi kwenkampani yomshuwalense noma umeluleki kwezezimali.
Yiba nesikhwama sezimo eziphuthumayo.
Isikhwama sezimo eziphuthumayo kumele sibe okungenani nesamba esilinganiselwa emholweni wakho wezinyanga eziphakathi kwezi-3 kuya kweziyi-6. Ngaphandle kwesikhwama sezimo eziphuthumayo uyoqala ukuthatha imali esikhwameni semali oyibekele ukuyisebenzisa esikhathini esithile esizayo bese ungena ezikweletini.
Yakha umnotho wakho kusenesikhathi.
Ungaguquli indlela ophila ngayo uma ukhushulelwa imali emsebenzini. Kunokuthi wandise izindleko zakho yengeza imali oyifaka emalini oyongayo noyibeka esikhwameni semali oyoyisebenzisa esikhathini esithile esizayo.
Phila kahle futhi ungabi nezikweletu ngokuba nohlelo lokwesula izikweletu.
Bala imali oyisebenzisa ukukhokha izikweletu, uyobe usuba nomqondo wokusebenzisa imali oyobe unayo emva kokukhokha lezo zikweletu. Bhala phansi onke ama-akhawunti akho, bhala phansi ukuthi ukweleta malini sekuhlangene nenzalo, kanye nemali ephansi okumele uyikhokhe ngenyanga i-akhawunti ngayinye.
Qala ngokukhokha lezo zikweletu ezinenzalo ephezulu noma lezo esezisalelwe yimali encane ukuthi uziqede. Noma yiyiphi imali eyengeziwe oyitholayo, isib. ukukhushulelwa umholo noma ibhonasi, ungayisebenzisi kodwa yisebenzisele ukuqeda ukukhokha izikweletu zakho. Funda njalo bese uyaqinisekisa ukuthi uyakuqonda lokho okusayinelayo. Thatha isikhathi sakho ngaphambi kokuthi usayine noma yini, ungavumi ukuthi uphushwe ukuthi usayine ngokushesha. Uma ungazwisisi kahle cela ukucaciselwa.
Yazi ukuthi yini lena oyikhokhelayo.
Kunoma yini oyithengayo noma imalimboleko, inkokhelo kumele ibekwe ngokucacile futhi nephesenti lenzalo oyikhokhayo noma oyitholayo kumele lichazwe kabanzi.
Yazi ukuthi yikuphi okhavwe kukho.
Ngabe ukhona umshuwalense oxhumele nalokho okuthengayo? Ukhava ini, futhi nini? Ngabe kukhona okunye okungangeni lapho? Ngabe kudingekile?
Yazi amalungelo akho nokumele ukwenze njengekhasimende.
Amalungelo nokumele ukwenze kuyohlala njalo kufakiwe ezivumelwaneni.